के होला त यो बर्ष नेफ्टा अवार्ड ? « Mazzako Online
के होला त यो बर्ष नेफ्टा अवार्ड ?
यो बर्ष नै नेफ्टा अवार्ड गर्ने तयारी चलचित्र प्राविधिक संघले गरेको छ । गतबर्ष प्राविधिक संघको आयोजना र ड्रिम हाइ नेपालको सहकार्यमा नेफ्टा अवार्ड आयोजना गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण चैत्र २२ गते तोकिएको अवार्ड सम्पन्न हुने सकेन ।
तर, १० औं संकरणको अवार्ड नेपालमै आयोजना गर्ने आयोजकले तयारी तिव्र पारेको छ । चलचित्र प्राविधिक संघ र ड्रिम हाइ नेपालले माघ १० उत्कृष्ट ५ को मनोनयन सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । यही दिनमा नै अवार्डको मिति तय गर्ने बताइएको छ । अवार्ड आयोजना नेपालमै हुनेछ ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका लागि अवार्ड आयोजना गर्न लागिएको चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले बताए । चलचित्र प्राविधिक संघले विगतका ४ वटा अवार्ड विदेशमा आयोजना गरेको थियो । नेफ्टा अवार्ड फिल्म क्षेत्रमा चर्चित मानिन्छ ।